Repellents ho an'ny alika: voajanahary sy artifisialy | Tontolo alika
Fanafody alika: voajanahary sy artifisialy
Nat Cherry | | Training
Ilaina tokoa ny famonoana alika raha te-hitazona ny alika tsy ho eo amin'ny tokotanintsika na ny zaridainantsika isika. Misy karazany maro, na voajanahary, amin'ny spray na koa amin'ny endrika fitaovana izay mamoaka ultrasound, na dia tsy mahomby na azo antoka ho an'ny biby foana aza izy ireo.
Ao amin'ity lahatsoratra ity hahita alika kely vitsivitsy ho an'ny alika isika ary, ho fanampin'izay, hiresaka lohahevitra sarotra hafa koa izahay, toy ny antony tsy tsara ny fampiasana ultrasound ho toy ny fanafody fanafoanana, ary homena toro-hevitra sy toro-hevitra vitsivitsy ianao repellants namboarina ho an'ny alika.
MENFORSAN Repactor ...
MENFORSAN famonoana bibikely ...
MXYOO alika tsy eto...
1 Ny fanafody tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Antipi ho an'ny alika sy saka
1.2 Mpanala oliva
1.3 Paoma manohitra manaikitra
1.4 Fanalana fanafody sy fanaka vita amin'ny fanaka sy karipetra
1.5 Mpandroaka voajanahary miorina amin'ny dipoavatra
1.6 Wire harato
2 Karazan'ireo repellers ho an'ny alika
3 Ny fampiasana ultrasound amin'ny alika
4 Fanafoanana voajanahary
4.4 AZA mampiasa amoniaka
5 Aiza no hividianana fanafody famonoana alika
Ny fanafody tsara indrindra ho an'ny alika
Antipi ho an'ny alika sy saka
Ity vokatra Menforsan ity dia natao manokana hisorohana ny saka sy ny alika tsy hitsika amin'ny facades, sideboards na koa ny kodiaran'ny fiaranao aza. Ilay menaka manitra dia manana hanitra mahafinaritra tokoa ary natao ho an'ny alika sy saka rehetra, ho fanampin'izay, azo ampiasaina ao an-trano sy any ivelany izy io. Mora dia mora ny fampiasana azy, satria tsy mila manadio tsara ilay faritra voalaza ianao ary manaparitaka azy amin'ny vokatra. Tsy maintsy ampiasaina mandritra ny andro maromaro izy io mba hahomby.
By ny lalana ny mpanamboatra dia mamporisika ny tsy hanadiovanao ny faritra ho tsaboina amin'ny famotsiana na amoniaka satria ny fofona dia mety hisarika ny biby hihaona any satria ny mimi dia manana fofona mitovy. Farany, aza mampiasa ny vokatra eo ambonin'ny zavamaniry.
Voninkazo 40559 - Manohitra ...
Mitovy amin'ny vokatra teo aloha, ity famafazana mba hisorohana ny saka sy ny alika amin'ny fandoanana amin'ny faritra tsy ilaintsika. Tsy misy poizina izy io ary miasa amin'ny fomba tena tsotra, miteraka fofona fanoherana mahery vaika ho an'ny alika sy saka. Tsotra ny fomba fampiasana azy, satria tsy mila manadio tsara ny faritra fotsiny ianao ary mampihatra ilay vokatra, izay tsy maintsy havaozanao tsindraindray mba tsy hahafoana ny vokany ary hanamafisana ny hafatra. Ho fanampin'izany, izy io dia miasa ihany koa ho an'ny faritra andalovana izay tsy tianao handalovan'ireo biby ireo. Na izany aza, rehefa apetraka izany dia aza atao an-tampon'ireo zavamaniry.
Paoma manohitra manaikitra
Ny Healthy Dog Co Spray ...
Raha ny alikanao tia mitsako ny kiraronao toy ny siligaoma, afaka manampy ity tsifotra manohitra manaikitra ity. Izy io dia ampiasaina ho an'ny alika sy saka ary mampiofana azy ireo tsy hanaikitra ireo toerana nanefofana azy. Izy io dia voaforona singa voajanahary tanteraka, noho izany dia tsy misy poizina, ary miasa amin'ny fomba tena tsotra izy io: ny tsiro paoma mangidy tsy mahafinaritra azy dia manaisotra ny faniriana hanaikitra hatrany.
Na izany aza, toa mifototra amin'ny fanehoan-kevitra dia tsy mandeha amin'ny alika rehetra ... toa misy mankafy azy!
Fanalana fanafody sy fanaka vita amin'ny fanaka sy karipetra
Iray amin'ireo vokatra mahaliana indrindra ho an'ny tazomy ny alikanao hiala amin'ny fanaka, ny sofa, na ny rugs sy ny rug dia io mpandroaka io amin'ny endrika tsifotra natao ho an'ireo toerana ireo. Ity tsifotra ity dia tonga amin'ny tavoahangy 100 ml, voajanahary tanteraka izy io ary azo ampiasaina na anaty trano na any ivelany, natao ho an'ny alika sy saka ihany koa. Na izany aza, manana teboka ratsy izy io, satria somary lafo kokoa noho ny spray hafa mitovy karazana aminy.
Mpandroaka voajanahary miorina amin'ny dipoavatra
BSI Hot Exit - Maharikoriko ...
Mety amin'ny fampiasana ivelany, indrindra amin'ny toerana misy ahitra, ity alika mpandroaka alika ity (miasa miaraka amin'ny saka ihany koa) miorina amin'ny akora voajanahary toy ny dipoavatra hamela fofona izay tena tsy mahafinaritra azy ireo izany. Misy vokatra roa litatra izay tsy maintsy apetrakao mba hahomby, raha tsy izany tsy mandeha.
Toy ny amin'ny vokatra hafa amin'ity fomba ity, ny teboka ratsy dia, tsy fantatra ny safidin'ny alika, mety hahita olona tianao ny fofona ianao ary tsy hamaha ny olana.
Mirefy 100cm X 20M...
Amin'ny zava-dratsy lehibe, amin'ny fanafody lehibe: Ho an'ireo mitady fomba hitazomana ny saka sy ny alika tsy ho tratry ny zaridainany, iray amin'ireo vahaolana mahomby indrindra ny fametrahana fefy. izay manodidina ny toerana tianao harovana. Na dia ny kely indrindra na ny haingon-trano aza dia tsy hanana zavatra firy hatao raha hisorohana ny fandalovan'ny biby, ny harato tariby dia zavatra hafa. Ity maodely ity dia vita amin'ny tariby rakotra plastika maitso ary misy 20 metatra metatra ny haavony izay azonao apetraka araka ny itiavanao ny manodidina ny patio na ny zaridainanao. Ankoatr'izay, ny lavaka ao amin'ny harato dia kely dia kely ka tsy misy mahazo miditra na mivoaka.
Karazan'ireo repellers ho an'ny alika
Ny fahamendrehana sy ny fahita matetika an'ny samy hafa ny repellers misy ny alika dia tsy miankina amin'ny vokatra ihany, fa koa ny alika tiantsika horoahina, toy ny taona na ny karazany, ka ny fahombiazany dia miankina amin'ny fitsapana sy ny lesoka indraindray. Noho izany, amin'ireo karazana repellents isan-karazany hitantsika:
Izy ireo no fahita matetika any amin'ny magazay, na amin'ny endrika famaohana, baolina na gel. Izy ireo dia zatra mametraka eo amin'ny faritra tianay hampitahorana ny alika. Izy ireo dia azo avy amin'ny akora voajanahary na akora simika izay miteraka fofona tsy mahafinaritra amin'ny alika. Natao hialana amin'ny kaikitry ny trano izy ireo ary raha apetraka any ivelany dia tsy maintsy havaozina matetika mba tsy hahaverezana ny vokany.
Ultrasounds Izy ireo dia misy fitaovana apetraka ivelany, ary toa mamoaka fahita matetika izay mandroaka ny alika. Na izany aza, tsy asaina izy ireo raha manana alika ao an-trano ianao, satria hahasosotra azy ireo koa izany.
Ho an'ny loza lehibe, fanafody lehibe: iray amin'ireo repellers alika mahazatra indrindra dia fefy na fefy, izay manodidina ny faritra harovana (toy ny patio). Ny vaovao tsara dia ny fitazonan'izy ireo alika tsy hahomby, na dia tsy ilaina amin'ny saka na voromailala aza izy ireo, izay mahay mihanika na manidina.
Farany, fomba iray hampitahorana ny alika ny famoronana akora misy singa voajanahary hitazonana azy ireo hiala ny zaridainanay. Raha ny mahazatra dia manomboka amin'ny singa tsy mahafinaritra alika izany. Satria mivoatra be kokoa ny fofon'izy ireo noho ny antsika dia fomba tsara iray hampitahorana azy ireo izany, na dia mitaky antsika hanavao azy io aza satria manjavona ny fofona.
Ny fampiasana ultrasound amin'ny alika
Ny iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra hampitahorana ny alika dia amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana izay mamoaka ultrasound. Ireto gadget ireto dia tonga amin'ny endrika paosy (hampiofana alika) na amin'ny fomba azo apetraka ao an-jaridaina, ary mamoaka fahita matetika izay alika ihany no maheno, izay tsy mahafinaritra azy ireo ary, amin'ny ankapobeny, mampatahotra azy ireo .
Na izany aza, ny fampiasana azy dia tsy soso-kevitra na tena azo atokisana. Etsy andaniny, misy ny vokatra izay tsy mandeha mivantana, na ny alika sasany ihany no miasa (ny fahatsapana ny akony dia miankina amin'ny anton-javatra toy ny taona, karazany ...). Etsy ankilany, masiaka izy ireo ary mety hanimba ny sofiny, noho izany dia tsy safidy tena soso-kevitra izy, indrindra raha manana alika ianao.
Raha tsy mafana fo amin'ny vahaolana azo amin'ny varotra ianao, afaka mamorona repellants manokana isika ho an'ny alika amin'ny fomba voajanahary ary amin'ny fomba tena mora vidy sy mora.
Vinaingitra dia singa iray azontsika ampiasaina amin'ny fomba mandaitra mba hitazomana ny alika, satria toa ny fofony no tsy zaka indrindra. Ny fanomanana ny vahaolana dia tena moraSatria mila tavoahangy famaohana foana ianao ary afangaro rano 50% amin'ny vinaingitra 50% (ampiasao vinaingitra mba hadio kokoa noho ny akanjo). Ampiasao eo an-tampon'ilay faritra tianao hampitahorana ireo alika ireo. Aza mampiasa ny fangaro eo ambonin'ny zavamaniry na ahitra raha tsy tianao ny mamono azy.
Ny voankazo voasarimakirana dia fofona iray hafa mankahala ny alika, ka izany no safidy tsara hampiasaina toy ny fanafody famonoana. Ny fomba mahazatra indrindra anaovana azy dia amin'ny hoditra voasarimakirana na voasarimakirana miparitaka eraky ny faritra. izay itiavanao azy ireo amin'ny fitsidihana alika, na dia sabatra roa lela aza: na dia mamoaka alika aza ny fofon'ny sakamalao, dia mety hahasarika ny voalavo sy ny totozy.
Mpanala alika voajanahary tsara hafa koa ny fampiasana dipoavatra, ny fofona izay tsy tian'izy ireo mihitsy. Azonao afangaro ny vovo-dronono sy dipoavatra mainty ary aparitaho amin'ilay faritra tianao harovana ny alika. Toy ny amin'ny tranga hafa, tsy maintsy havaozinao amin'ny fotoana hafa ianao, satria ny orana dia hampihena ny asany.
AZA mampiasa amoniaka
Amin'ny fomba mitovy amin'ny vinaingitra, amoniaka mandroaka alika, na izany aza dia mety hiteraka fahasosorana sy fahasimbana amin'ny tenda koa izany, ka tsy asaina mampiasa azy io. Araka ny efa nolazainay, ny vinaingitra dia vahaolana mandaitra mitovy.
Aiza no hividianana fanafody famonoana alika
Misy toerana maro izay ahafahantsika mividy fanafody famonoana alika azontsika ampiasaina mba hitazomana ny patio na ny terrasantsika ho voaro amin'ireo mpiditra an-tsokosoko. Ohatra:
En Amazon Hahita karazana repellants isan-karazany ianao (amin'ny spray, amin'ny baolina, voajanahary, artifisialy ...) izay mety hanampy. Ho fanampin'izay, amin'ny asany Prime no anomezanao azy ao an-trano ao anatin'ny fotoana fohy, ary noho ny fanehoan-kevitra an-jatony maro dia azonao atao ny misafidy ny iray mety indrindra amin'ny zavatra ilainao.
En fivarotana manam-pahaizana manokana toa an'i Kiwoko na TiendaAnimal dia manana karazana repellants koa izy ireo, ary samy manana ny kalitaony avokoa. Amin'ny maha-teboka miampy azy, ny zava-misy fa ireo fivarotana ireo dia misy ny fahafahan'ny mividy an-tserasera na ara-batana dia mety tena ilaina raha mitady vokatra na torohevitra manokana ianao.
Ary farany, ao amin'ny faritra fanaovana zaridaina lehibe toy ny Carrefour na DIY centres toa an'i Leroy Merlin dia hahita repellants vitsivitsy ihany koa ianao, na dia somary mahantra kokoa aza izy ireo amin'ny karazany, noho izany dia safidy tsotra fotsiny izy ireo handinihana fa afaka miala amin'ny olana.
Ilaina ny fanafoanana ny alika amin'ny alàlan'ny alika ivelan'ny tokontany na zaridaina. Lazao aminay, efa nampiasa ny iray tamin'ireo fanafoanana ireo ve ianao? Mety aminao ve izany? Fantatrao ve ny fomba fahandro voajanahary tsy nampidirinay?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fanafody alika: voajanahary sy artifisialy
Ny dingana tena ilaina 4 rehefa mandray alika
Mpiaro seza fiara alika